Valorant Hacks ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
ỌR URU Hacks
Na-achọ inweta aka gị na Valorant a pụrụ ịdabere na ya? Na Gamepron, ihe ọ bụla ga-ekwe omume! Na nanị dị atụmatụ ọbọp n'ime dịghị ngwugwu, ọ bụ ihe kasị mma Valorant eji Aghọ Aghụghọ Ule ị ga-abịa gafee.
Boughtzụrụ a Valorant mbanye anataghị ikike? Chọta usoro ndị ọzọ ebe a
Biko rụba ama: Tupu ị zụrụ ha Valorant hacks, gbaa mbọ hụ na akụrụngwa ị na-achọ ịzụta ka emelitere nso nso a ma ọ bụ ka dị n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na anyị na-emelite ngwaọrụ anyị oge niile, ọ na-egbu oge n'oge nnyefe n'ọnọdụ ụfọdụ; mgbe ọ na-abụkarị ozigbo, ọ nwekwara ike were awa ole na ole. Ngwaọrụ anyị niile akpọchiri akpọchi HWID, nke pụtara na ị ga - eji ya naanị otu kọmputa - gbaa mbọ hụ na kọmputa gị dakọtara na ngwa anyị niile tupu oge eruo. Agaghị enye nkwụghachi ụgwọ ọ bụla ozugbo ilele igodo ngwaahịa ahụ!
Ndi A Huru Anyi Inweta ọnụ ahịa Hacks
Valorant Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & Ọzọ
Hyper mbanye anataghị ikike
Multi-Legit mbanye anataghị ikike
ịzụta Inweta ọnụ ahịa Hacks na 4 nzọụkwụ
Họrọ egwuregwu ịchọrọ ịzụta igodo ngwaahịa na Gamepron (ọtụtụ ịhọrọ site na!)
Site n'ebe ahụ ị ga - achọ ịhọrọ mbanye anataghị ikike nke kachasị mma maka mkpa gị (Aimbot, Wall Hack, wdg)
Jiri ugwo na nkwanye ugwo anyi were kwuo ihe banyere ya, kwenye ihe nchekwa nke ndi ahia
Ozugbo ịzụrụ igodo i nwere ike iji ya nweta ohere gị hacks / Ndị aghụghọ!
Gịnị mere Gamepron Valorant hacks?
Site na Cooper Hollmaier - Emelitere August 10th, 2021
Mmelite kachasị ọhụrụ maka Valorant gbadoro ụkwụ na imezi arụmọrụ ime egwuregwu ka ọ wee dị mma. E megharịrị mgbako ejiri mee ihe maka igbochi mkpachị ka nchapu ahụ wee bụrụ ihe a na -adịghị ahụkebe, n'agbanyeghị atụla anya na a ga -ewepụ ya kpamkpam.
Valorant's patch 3.00 has ẹkenam a ọhụrụ gị n'ụlọnga na egwuregwu: KAY / O, ezie na kwachie ahụwokwa ụfọdụ ndị ọzọ itule mgbanwe. Dịka ọmụmaatụ, agbanweela ngwa agha niile ka ha nwee ike ịdị na-edozi ibe ha, ndị ọrụ na-emezigharị ka ike ha ghara ime ka otu onye meta ibe ya.
Ihe ozo nke puru iche maka Valorant bu Patch 2.10, mana o gha egbu oge, mgbanwe ya agbanyela aka na Patch 2.11. Ihe kpatara nke a bụ na Egwuregwu Riot na-aga ịrụ ọrụ na njikarịcha injin nke egwuregwu ka ọ dịrị mfe imelite na itinye mmezi ahụhụ.
Valorant abụghị egwuregwu maka ndị ọhụrụ na-agbapụ egwuregwu, anyị ga-ekwudị na ọ kachasị mma maka ndị na-egwu FPS aha kemgbe ha bụ nwata! Valorant mere akara ya na ụlọ ọrụ nke afọ a site na ịzọrọ ụgwọ ọrụ nka karịa ihe ọ bụla ọzọ, ọ dịkwa ka ha emeela nke ahụ - ndị na-egwu egwuregwu a ga-aghọta etu afọ ojuju ọ bụ ịwụli ngwa ngwa gbaa otu onye iro. okpokoro isi. Site na njirimara dị ọcha dị ka Valorant Aimbot, ESP, Wall Hack, na NoRecoil, anyị na-etinye ike egwuregwu ndị ọkachamara na aka gị.
Enwere otutu nuisances nke na-abịa na Valorant na-egwu egwu, ma ọ bụrụ na ị na-emeghe egwuregwu ahụ maka oge mbụ ọ nwere ike ịda mbà (ikwu nke kachasị). E nweghị usoro usoro enịm ke ugbu a nke pụtara na onye ọ bụla na-aga na-ekwekọghị na ibe, e nweghị “nkà fim” ikewapụ Player. N'ihi ya, o yikarịrị ka ị ga-enweta ya ugboro ugboro ruo mgbe ị mepụtara nkà ịkwesịrị ịsọ mpi. Offọdụ n’ime anyị enweghị oge achọrọ iji wulite ikike anyị nwere na Valorant, ndị ọzọ achọghị achọghị inye nsogbu - ọ bụ ya mere Gamepron Valorant Hacks anyị nọ na nnukwu mkpa!
Anyị Valorant Hack e mbụ kere ka soro na asọmpi mkpa nke egwuregwu na egwuregwu a, dị ka anyị na-aghọta na ọ bụ naanị na-aga na-eto eto si ebe a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụkwụ gị n'ọnụ ụzọ ma na-a ezi nna ukwu nke Valorant, eji anyị Valorant Hacks na Ndị aghụghọ na-aga ka ị na gị "elu" ọtụtụ ihe ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla ọzọ ọzọ. Gị nkezi mbanye anataghị ikike na-eweta ga-ele anya na anyị ngwaọrụ na nrube isi, dị ka ha ga-eche otú anyị jisiri abịa ọtụtụ elu-edu atụmatụ n'ime ndị dị otú ahụ dị mma n'anya obere ngwugwu! Ihe niile anyị na Ndị aghụghọ bụ 100% achọpụtaghị dị ka nke ọma, ya mere na ị gaghị echegbu onwe banyere mgbochi-aghọ aghụghọ usoro usoro ịchụkwudo gị.
Ekwela n'iyi n'ihu kọmputa gị na ihuenyo na-agbalị ka mpi na sweats, dị nnọọ ka anyị Valorant Ndị aghụghọ na-ele gị akara ogbe elu! E nwere ọtụtụ ihe odide dị iche iche iji jiri Valorant mee ihe, ọ bụ ezie na ike ha ga-adịgasị iche iche, ị ga-enwe ọkwa ọkachamara na-agbanwe agbanwe mgbe ị nwere Gamepron n'akụkụ gị.
Valorant Wall mbanye anataghị ikike (ESP)
Valorant Player ozi ESP (Aha, Ogwe ike, anya)
Valorant Nkebi ESP na nzacha
Aalobot nke Ukwuu
Valorant onye iro ịdọ aka ná ntị mata
Valorant ibu-awụlikwa elu mode (ọ dịghị ọdịda mmebi mgbe ọrụ).
Valorant ọkpụkpụ & nzube isi configurable.
Onye na -akwụ ụgwọ Valorant Recoil
Ezigbo Inweta ọnụ ahịa Hack atụmatụ
Spotting onye iro Player na-maa ụlọikwuu ma ọ bụ dị n'azụ siri ike / opaque na-ebupụta ka mfe mgbe ị nwetara anyị Player ESP nyeere.
Valorant player ọmụma bụ mgbe niile na anyị Valorant ESP, ekwe ka ị na-ahụ player aha, ahụ ike Ogwe, na ha anya dị ka nke ọma.
Knowingmara ihe ngwa agha na ihe ndị iro gị na-arụ ọrụ nwere ike ịdị oke mkpa n'oge ụfọdụ. Ọ bụ ya mere ihe Item ESP na nzacha dị mkpa ịgụnye na Valorant Hack.
Anyị Valorant Aimbot ga-enyere gị aka si na-ekwe nkwa na atụmanya na-egbu maramara ọkachamara site mkpari ziri ezi, na-ahapụ gị na-emegide na-eju na ụjọ.
Valorant mgbo track (irè na obere na ufọt ufọt)
Jiri anyị Valorant Aimbot ka ịdebe bọlbụ gị na njirimara “Bullet Track” (ezigbo maka ma obere ma etiti etiti).
A Warning ozi ga-gbapụta na gị na ihuenyo mgbe onye iro na-ma aiming na ị ma ọ bụ nanị na-eme na-nso dị nso.
Valorant ibu-awụlikwa elu mode (ọ dịghị ọdịda mmebi mgbe ọrụ)
Ha agaghị atụ anya na ị ga-ada site n'ebe dị elu dị otú ahụ! Jiri ọnọdụ Super Jump anyị iji zere ịda ọdịda mgbe ị na-egwu Valorant.
Valorant ọkpụkpụ & nzube isi configurable
Hazi Valorant Aimbot ma ọ ga-amasị gị! Abịa na-enwe Ọkpụkpụ Prioritization na ndị ọzọ na configurable nhọrọ gụnyere, na-enye gị ụzọ ọzọ egosipụta karịa ndị ọzọ Valorant Hacks
Valorant aimbot anya ndenye ego
Anyị Valorant Aimbot na-onwem na a “Visible achọpụtazi” atụmatụ, na-enye gị ohere ile anya ebe gị mgbọ na-eme mmetụta.
Naghachi ụgwọ bụ nnukwu akụkụ nke Valorant Hack anyị, ebe ọ na - enye gị ohere ịgbanye ndị iro gị n’enweghị nlekọta n’ụwa.
Bụrụnụ ndị kachasị ọkpụkpọ ọkpụkpọ kacha mma n’ụwa!
Nkwupụta nkwuwa okwu ime, nke ahụ bụ eziokwu, mana anyị maara etu anyị si dị ike Valorant Hacks nwere ike ịdị n’aka ndị egwuregwu aka nri. Nwere ike ịghọ onye ọkpụkpọ Valorant kacha mma n'ụwa, ihe niile ọ ga - ewe bụ ntakịrị nraranye na ohere ịnweta Valorant Hacks kachasị atụkwasị obi. Gamepron na-achọ inyere gị aka inwekwu ọganiihu (ma nwekwuo ọ !ụ!) Mgbe ị na-egwu egwu!
Popular Valorant Hacks na Ndị aghụghọ
Valorant ESP na Wallhack
Ndị ọzọ Valorant Hacks na Ndị aghụghọ
Valorant Hacks na Ndị aghụghọ amụbawo na ewu ewu na n'oge gara aga ọnwa ole na ole, dị ka egwuregwu ahụ e wepụtara na eze na 2020. Anyị na-mgbe na-agbalị ịnọ n'elu ihe ebe a na Gamepron, nke bụ ya mere na anyị na mgbe na-ele anya ndị kasị ewu ewu. atụmatụ ugbu a n'ime ihe ọ bụla e nyere Valorant Hack. Anyị etinyeghị naanị atụmatụ ndị ọrụ anyị rịọrọ maka ọtụtụ, mana anyị etinyekwala atụmatụ ole na ole ndị ọzọ ị na-atụghị anya ịhụ! Iji nọgide na-enwe ọnụnọ anyị dị ka onye ndú n'ime mbanye anataghị ikike mmepe ụlọ ọrụ, anyị na-mgbe niile na-achọ ụzọ ka mma n'elu anyị Ndị aghụghọ - na ihe mere anyị ji mara dị ka # 1 na-eweta nke Valorant Hacks online!
Mgbe ị chọrọ ohere kasị ewu ewu na Valorant Hacks na Ndị aghụghọ na ịntanetị, Gamepron na-aga na-ị prepped na njikere tụgharịa. E nwere ihe na-agwa ihe anyị na-aga na-enye anyị ọrụ na-esote, n'ihi ya, ruo mgbe ị nwere ike dị na-achị anyị ugbu a tọhapụrụ Valorant Hacks na Ndị aghụghọ.
Aimbots ga-abụ akụkụ dị mkpa nke obodo hacking maka ogologo oge anyị nwere ike ịgwa ebe ọ bụ na izi ezi ga-ekpebi onye mmeri nke egbe egbe na Valorant. Enweghi ihe ndi ozo a gha acho, dika i gha enweta ugwo maka ntinye aka nke onye oru gi - nke a mere hacking na Valorant bu ihe kwesiri ime. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ ga-agba ọsụsọ na uwe elu ha, ị ga-eji ọrụ n’aka n’ịgba egbe niile. Anyị Valorant Aimbot-abịa onwem na ihe n'ụba nke bara uru atụmatụ, niile nke ga-ekwe ka ị weghara ihe ọ bụla egwuregwu na ị bụ akụkụ nke.
Mmasị nke Ọkpụkpụ Prioritization na Auto-Aim / Fire dị ebe a, mana ị ga-ahụkwa na Valorant Aimbot nwere Ezigbo Ebumnuche. Nwere ike ịgbanye ngwa ngwa wee wepụ ndị mmegide na uche gị, ị nwedịrị ike ịme ya n’emetụghị onwe gị anya. You'll ga-egwuregwu a mkpari K / D ruru na anyị Valorant Ndị aghụghọ nyeere!
Iji anyị Valorant ESP na Wall Hack ga-ọ bụghị nanị na-ekwe ka ị na-eme nke ọma dị ka a solo ọkpụkpọ, ma ọ ga-ọbụna na-enye gị otu onye elu-aka dị ka mma. Ọ bụrụ na ị na-agwa ha okwu ndị iro, ha nwere ike inyere gị aka ma nyere gị aka imeri ọtụtụ egwuregwu - ị nwekwara ike ịhọrọ ịgbachi nkịtị ma chekwaa ọtụtụ igbu onwe gị! Iji anyị Valorant ESP ga-eme ka ị hụ ụdị egbe onye iro gị na-eji, yana ahụike ole ha hapụrụ (na ọbụlagodi / nso ha nọ gị). Anyị Valorant Wall mbanye anataghị ikike na-mgbe niile ga-abụ ezigbo maka spotting campers ezobe gburugburu nkuku na ụlọ, karịsịa na Valorant.
Ọ bụrụ na ị na-egwuri egwu Valorant tupu ị mara na nkuku peek bụ akụkụ buru ibu nke egwuregwu ahụ, ọ nwere ike ịbụ ihe na-ekpebi onye ga - enweta mmeri. You'll ga-enwe ike ịhụ ihe ọ bụla na ihe niile anyị Valorant ESP na Wall Hack nyeere, ya mere na ị gaghị echegbu onwe gị banyere ịpị isi gị ma bibie gị.
The akara ukwu mma nke anyị Valorant mbanye anataghị ikike bụ incredibly bara uru ọ bụla mode ị na-egwu, dị ka idebe track nke ndị iro gị mgbe a mfe. Mgbe ị na-atụle eziokwu na ị nwetara Valorant ESP na Wall Hack n'elu nke a iji rụọ ọrụ, ọ dịghị mkpụrụ obi na-egwu Valorant nke nwere ike zoo n'anya gị. You'll ga - ahụ ihe niile na - aga n’ihu n’egwuregwu ahụ, mgbe ị hụrụ Footkwụkwụ na - eduga gị n’agha, ị ga - eme ka njirimara mmebi ahụ dị elu wee kwụsị ha ngwa ngwa.
The Anya mbanye anataghị ikike bụ zuru okè n'ihi na ime ka ị mara ma onye iro na-akpụ akpụ ma ọ bụ, na-ekwe ka ị mata campers na ngwa ngwa. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ị ga - enwe ike ihu ma ọ bụrụ na mmadụ na - achọ ịkwali ọnọdụ gị - ihe ọ bụla onye iro na - eme, ị ga - agụ ha dịka akwụkwọ. Ngwakọta nke atụmatụ atọ a na-enye gị uru n'ọgụ ọ bụla ị na-alụ, n'agbanyeghị agbanyeghị ndị iro nọ ugbu a!
Anyị nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ịtụnanya iji kwuo banyere mgbe a bịara na Valorant Hacks anyị, mana otu n’ime ihe ndị kachasị mkpa bụ atụmatụ ndị mmepe mbanye anataghị ikike ga-abụ mgbochi aghụghọ. Usoro nchedo anyị echedoro ma ọ bụ naanị yana ngwaọrụ ndị dị na Gamepron, na-eme ka ndị ọrụ anyị nwee udo nke uche. Ma ị na-aghọ aghụghọ ule na akaụntụ ohuru ma ọ bụ nke ị na-eji kemgbe ọtụtụ afọ, anyị na-eme atụmatụ ịchekwa ndị ahịa anyị niile pụọ na nsonaazụ nke aghụghọ.
Site na mbanye anataghị ikike 100%, ị nwere ike ịme ihe ọ bụla ịchọrọ na Valorant, dịka ịme ọganihu ga-abụ ikuku (na
kwuo obere ihe). Anyị enwetakwala usoro nkwado ndị ahịa na-enweghị atụ iji tụlee ebe a na Gamepron, yabụ ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla bilitere gburugburu Valorant Hacks na Cheats, egbula oge ịkpọtụrụ anyị. Ọ bụ egwuregwu dịtụ ọhụụ yana ebe ngwa anyị dịkwa ọhụụ, anyị ka ga-eme ka emelite ya iji hụ na ndị ahịa anyị nwere obi ụtọ na nzụta ha!
Apex Hacks ajụjụ
Gịnị mere anyị Valorant Hacks
Valorant abụghị egwuregwu ịchọrọ igwu egwu, ebe ọtụtụ mmadụ na-aga ya dị ka mpi mpi. Nke a pụtara na e nwere ọtụtụ ndị egwuregwu dị elu dị njikere ịkụcha ezé gị, mana echegbula! Site na iji Valorant Hacks anyị, ị ga - etinye onwe gị n’ọnọdụ ọ bụghị naanị na ịga nke ọma mana nwekwuo ọ butụ mgbe ị na-eme ya.
Kedu ihe kpatara anyị ji dị mma Aimbot
Nri Valorant Aimbot bụ nke ga-agbanwe ụzọ gị kpamkpam. Kwesighi ịbebe na ndò wee chere ohere iji gbuo mmadụ, ị nwere ike igwu egwu wee soro onye ọkpụkpọ ọ bụla ị hụrụ! You'll ga-enweta ọtụtụ isi, ịkwanyere ugwu karị, ma nwee ọtụtụ ihe ọ funụ mgbe ị na-egwu egwuregwu mgbe Valorant Aimbot anyị na-arụ ọrụ. Agaghị enwekwa gị ọghọm!
Gịnị mere anyị Valorant ESP
Isi okwu nke ịzụta nweta Valorant Hacks anyị bụ n'ihi na ha na-enye gị ohere ịnweta uru. Want chọrọ iji nweta ihe dị ukwuu nke ihe elu-aka dị ka o kwere, na ikpokọta ozi iji anyị Valorant ESP na-na-aga aka. Ga - ahụ ma ọ bụrụ na ndị iro akwalitela ngwa ọgụ ma ọ bụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha adịghị ahụ ike. Gaa maka onye iro na-esighị ike ma ọ bụ bulie ogige anyị na Valorant ESP anyị.
Kedu ihe kpatara anyị ji baa uru Wallhack
Ọ dị ka ọnwụ ọ bụla ọzọ ị na-emeso na Valorant bụ n'ihi mmadụ na-ama ụlọikwuu ma ọ bụ na-agba ọsọ ngwa ngwa n'akụkụ akụkụ. Dị ka ikpe, i nwere ike iji anyị Valorant Wall mbanye anataghị ikike ịhụ pụrụ iyi egwu na-ezo n'azụ mgbidi na maa ụlọikwuu ndụ ha pụọ ​​- nke a bụ mgbe ị nwere ike sinik n'elu ha na-anapụta ụfọdụ ngwa ngwa ikpe ziri ezi! Ndị na-ama ụlọikwuu anaghị enwe ọganihu, anyị maara nke a.
Gịnị mere anyị Valorant Norecoil
Iweghachite ga-abụ nnukwu nsogbu nye ndị egwuregwu ọhụụ, ebe ọ na-aga na-emetụta oke etu agbapụ gị si zie ezi. Cannot gaghị amị amị mgbe ọ bịara izi ezi, ma ọ bụrụ na ị chọghị ime ka ọ “pụta ìhè” ị na-aghọ aghụghọ ule na Valorant Aimbot, iji anyị Valorant NoRecoil ọrụ ga-abụ na-esote ihe kasị mma ị pụrụ iji. Ebumnuche gị ga-abụ eziokwu mgbe niile na ọrụ anyị NoRecoil na-arụ ọrụ.
Olee otú ibudata ihe kacha mma Valorant hacks?
Mbụ, ị ga-azụta igodo ngwaahịa n'aka anyị. Ozugbo ị nwetara akara ngwaahịa site na Gamepron, ịnwere ike iji ya nweta ohere ọ bụla nke ịtụnanya Valorant Hacks - usoro nbudata / ntinye dị mfe ma bụrụ akpaghị aka maka ọtụtụ akụkụ! Ọ bụrụ n’ịchọghị ịlụ ọgụ maka akwụkwọ ntuziaka nke Valorant Hacks gị, ị ga-ahụ ihe Gamepron nwere maka ndị ahịa ya.
Gịnị mere gị Valorant hacks ndị ọzọ dị oké ọnụ karịa ndị ọzọ
Gamepron bụ ọrụ pụrụ iche nke nwere ike igbochi mmadụ ole na ole n'otu oge. Enwere ọnụọgụ nhọrọ ole na ole maka ndị ọrụ anyị, na nsonaazụ, anyị ga-akwụ ụgwọ "ọnụahịa adịchaghị" iji hụ na anyị enweghị ọtụtụ ndị na-abanye sava ahụ n'otu oge. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana aghụghọ anyị bụ 100% achọpụtabeghị!
Anyị nwere nhọrọ atọ dị iche iche maka ndị ọrụ nọ ebe a na Gamepron, ha niile ga-enyere gị aka ijikwa mkpa hacking gị n'agbanyeghị na ọ dị gị mma. Nwere ike ịhọrọ ịzụta igodo ngwaahịa nke na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, kwa ọnwa, ma ọ bụ kwa afọ; anyị chọrọ inye ndị ọrụ anyị ọtụtụ nhọrọ dị ka o kwere mee wee chee na nhọrọ atọ ndị a bụ ndị kachasị mma iji mee ihe.
Awesome Inweta ọnụ ahịa Hack atụmatụ